INyaniso yaseMantla-Ulwandle kunye nePhupha lomthandi wesikhephe
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAmy
INyaniso yaseMantla yeyona ndawo igqibeleleyo yomhambi wangaphandle! I-condo esandula ukulungiswa kwindawo yeCompass Bend ebekwe kanye ecaleni kwe-Snow's Cut Boat Ramp. Ukuhamba nje okufutshane ukuya eCarolina Beach State Park eneendlela ezininzi zokuhamba intaba / iibhayisekile. Kukwayindlela elula yokukhwela ibhayisekile ukuya kwiindawo ezininzi zokufikelela elwandle kunye neCarolina Beach Boardwalk enomtsalane. (IiBhayisikile ezi-2 ziNikiwe!) Ngentaphane yeevenkile, iindawo zokutyela kunye neendawo ezibonwayo, iPleasure Island ibonelela ngoluhlu olude lwezinto onokuzibona okanye uzenze!
Isanda kulungiswa ngezinto eziluncedo zale mihla. Izithethi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ii-Smart TV kwigumbi lokulala kunye neendawo zokulala. Ifriji yesiselo yeyona ipholileyo!
Igumbi elinye lokulala eliphakamileyo elinebhedi enkulu.
Isofa kaKumkanikazi elele eHoleni.
Ikhitshi eligcweleyo limiselwe ngayo nantoni na oyifunayo ukwenza isidlo kunye nesikhululo sesiselo esanelisa incasa yomntu wonke.
Iindawo ezininzi zokupaka kwindawo kwaye zinokuthatha iitreyila zesikhephe.
Iibhayisekile ezi-2 zabantu abadala ziyafumaneka ukuba uzisebenzise.
Kubonelelwe ngezitulo ezi-2 zaseBeach kunye nesiselo esibandayo.
Isilo-qabane sinobuhlobo ngentlawulo encinci. Akukho bungakanani okanye izithintelo zenzala kodwa nceda unciphise izilwanyana ezimbini. Nceda uthumele umyalezo kumamkeli xa ugcina indawo yakho ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya.
55" HDTV ene-I-Roku
Isakhiwo seCondo sikwindawo entle yokuhlala kwesi siqithi. Kufuphi kuyo yonke into.
When we aren't enjoying the beautiful area we live in, we are volunteering and helping local animal rescue groups! We want everyone to enjoy our little beach town and will work hard to make that happen.